လူသိပ်မရောက်တဲ့နောင်အင်းလေး တစ်နေရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူသိပ်မရောက်တဲ့နောင်အင်းလေး တစ်နေရာ
Posted by thureinmaung on Feb 27, 2012 in Copy/Paste |9comments
လောက်အကွာတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မွေတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပါ၊ အင်းလေးလူငယ်တွေရဲ့ workshop တစ်ခုကိုဦးဆောင်ဘို့ရောက်
ခေါင်တိုင်မှာ လှေငှားပြီး အင်းလေးထဲလည်တယ်
အခုတင်ထားတဲ့ပုံက အင်းလေး ဟိုဘက်အခြမ်းကလား
ရောက်ဘူးသေးဘူးဗျာ …လွန်ခဲ့တဲ့၁၅ နှစ်တုန်း ကတော့ အင်းလေးရောက်တယ်ဗျ.အဲဒီတောင်ပေါ်တော့ မေ၇ာက်တာသေချာတယ် ဓါတ်ပုံထဲမှာတောင်အတော်လှတယ်နေ ရေတွေ ကော အမျာြး့ကီးရှိရဲ့ လားဗျာ
အင်းလေးတော့ မရောက်ဖြစ်လိုက်တာ နာတယ်ဗျာ။၂၀၀၈ တုန်းက တောင်ကြီးမှာ(၁၅)ရက်လောက်နေခဲ့ပြီး
လွန်ခဲတဲ့ ၁၅ နှစ်က ရောက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ အခုအချိန်မှာသွားရင် အင်းလေးကန်က အများကြီး ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ဝက်စာလောက် ကျုံ့သွားပြီဗျာ။ ဘေးက ၀ိုင်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာ သစ်ပင်အသေးအမွှားပဲကျန်တော့တယ်။ သစ်ပင်မရှိတော့ မိုးမကောင်းတော့ဘူး။ မိုးမကောင်းတော့ ရေနည်းတယ် ။ နည်းနည်းပဲရွာတဲ့မိုးရေက အင်းထဲကို တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ တွယ်ကပ်မနေနိုင်တော့တဲ့ မြေကြီးနဲ့ သဲတွေကိုအတူတကွ သယ်လာတယ်။ ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ ။ မိုးကမရွာ သောင်ကထွန်း ။ ကဲ ….. မိုးရွာပြီဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့ ။ အဲ့ဒီအခါကျတော့ သောင်ထွန်းလို့တိမ်လာတဲ့အင်းက အရင်လိုဟန်တော့ဘူး ရေလျှံရော။
ရွှေညောင်မြို့ဆိုရင် နှစ်တိုင်းရေကြီးတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်းလေးက ပျက်စီးနေပါပြီ။
ညောင်ရွှေမြို့ အနောက်ဘက်ဆိုတာ ကျွန်မ မမှန်းတတ်လို့ ဘယ်ဘက်ကိုပြောတာလဲဟင်…
မိုင်းဆောက်ဘက်လား..ဟော်နန်းဘက်ကနေအထွက်ဘက်လား.. မြန်မာတွေကတော့ရောက်ဖြစ်ဖို့သိပ်မလွယ်ဘူး၊ တို့မြန်မာတွေက ခရီးသွားရင် ဘုရားဖူး၊ ဓာတ်ပုံရိုက် ဒါလောက်ပဲများတော့၊ ကိုယ်လည်းထိုနည်း၎င်းလိုပဲ ပြောရမှာပဲ။ tourists တွေကတော့ တချို့ trekking tour သွာတဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်။ အဲဒီဘက်ရောက် မရောက်တော့မသိဘူး။ အင်းလေးကန်ကြီးရဲ့ ဒီနှစ်နွေရာသီ အခြေနေကိုတော့စိတ်ပူမိတာ အမှန်ပဲ… မနှစ်ကလို အခြေနေ မျိုးမဖြစ်တော့အောင် လုပ်စရာရှိတာတွေမြန်မြန်လုပ်ကြပါလို့သာ တိုက်တွန်းချင်တော့တာပဲ..
အနောက်ဖက်ဆိုတော့ မိုင်းသောက် ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ အဲမိုရယ်..မိုင်းသောက်က အရှေ့ဖက်မှာရှိတာပါ.
ဖြစ်နိုင်တာက အနောက်ဖက်ခြမ်းကနေဆိ်ုတော့ ပေါင်းပိန်း တောင် ပေါ်ဖက်ခြမ်းကရိုက်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်..ပေါင်းပိန်းဆိုတာ.ခေါင်တိုင်ရေပူစမ်းဖက်ကို သွားတဲ့ကားလမ်းဘေးမှာရှိပါတယ်..
ရှိပါတယ်၊Anaconda ပြောသလိုဘဲ တောင်ကြီး-ဟဲဟိုးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့
ကျွန်တော်တင်ထားတာအများကြီးဘဲ၊တစ်ပုံချင်uးpload ပြီးယင်insert လုပ်တာဘဲ ဘာဖြစ်လို့
အင်းလေးကို ရောက်ဖူးခဲ့ပေမယ့် … စာရေးသူပြောတဲ့နေရာကိုတော့ .. ရှိမှန်းတောင် မသိခဲ့ပါဘူး … ။
အင်းလေးကနေတောင် သုံးမိုင်လောက်ထပ်သွားရသေးတယ်ဆိုတော့ … ခရီးသွားအများစု လမ်းတော့ လျှောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး…. ကားတို့ လှည်းတို့ စီစဉ်ထားပြီး ပြေးဆွဲမယ်ဆိုလျှင်တော့ … အဲ့ဒီနေရာ လူသိတန်ကောင်းပါရဲ့ …. ။ အဓိကကတော့ .. လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးပေါ့လေ … အဲ့ဒီနေရာ လူရောက်ဖို့ လွယ်လျှင်တော့ … နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ …သွားလည်တဲ့ လူတွေရှိလာမှာပါ …. ။
(အဲ့ဒီနေရာ လူသိဖို့ဆိုလျှင် ကောလဟာလ လွင့်ရမယ် …. နတ်နဂါးကြီးကို ဘယ်သူက ဘယ်နေရာမှာတွေ့တယ် .. ၊ ဆုတောင်းပြည့်တယ် … ဘာတယ် ..ညာတယ်ပေါ့ … )
ဟဲ ဟဲ ဒေါ်အီတုံးကတော့၊မားကက်တင်းရော၊ပရောပကမ်းနားရောလွှတ်ကောင်းဗျာ။
နဂါးကြီးရှိတယ်ဆို လူတွေလန့်တွားဘာအုန်းမယ်ဗျာ ———————————။
အဲသည်တော်ပေါ်ဘုန်းကြီးမှ နှစ်လုံး၊သုံးလုံး နှင့် ဘောလုံး ပွဲနိုင်/ရှုံး၊ကွက်တိဟောဒါ နေ့ချင်းညချင်း လူတွေချမ်းသာ၊ သွားကြတယ် လို့ဆိုပိုမကောင်းလား။တစ်ခါတည်းလမ်းတွေခင်း၊ တံတားတွေပါဖြစ်လာ မှာဗျား။